Asezoqashwa amaloli athutha udoti eJozini
UMNTWANA uNcamisile Zulu OyiSekelameya noMnu Fananaye Mathe imeya yoMkhandlu waseJozini bethula amaloli amasha ohlelo lokuqoqwa kukadoti kuleli dolobha Isithombe: SITHUNYELWE
Mbali Khanyile | November 26, 2021
KUXWAYISWE izigilamkhuba ezeba izimoto namaloli ziwadayiswe eMozambique emcimbini wokwethulwa kwamaloli aqoqa udoti eThala Centre, eJozini.
Kulo mcimbi obekungokokuqala uhlelwa emuva kokugcotshwa kwemeya entsha, uMnuz Fananaye Mathe bekuhlangene iziphathimandla zomkhandlu namalungu omphakathi laphu kuqhutshwe umkhankaso wokuqoqa imfucuza ehlanza leli dolobha ngemuva komcimbi.
UMathe uthe umkhandlu uzoyilwa impi yokwebiwa kwamaloli ngokujuba inkampani ezoqapha amaloli omkhandlu kwizizinda ezinobugebengu obudlangile.
"Lempi akuyona into esizoyinqoba manje kodwa okusemqoka ukuthi kube nesikwenzayo ngenhloso yokunqanda inkinga yamasela ezimoto. Siyawanxusa namalungu omphakathi ukuthi alekelele kule nkinga ukuze kube nesixazululo sayo," kusho uMathe.
Eqhuba uthe yize amaphoyisa enokudonsa izinyawo emacaleni okwebiwa kwezimoto namaloli, umkhandlu unazo izinhlelo zokusebenzisana nawo ngokumbisana nezinhlaka zemphakathi ezilwa nobugebengu.
Esinye sezakhamizi esicelwe ukungadalulwa, siveze ukuthi izigebengu kwesinye isikhathi bezifika zibophe amalungu omndeni bese zicela ubaba wekhaya ukuba adedele imoto okungenjalo bazonquma amalungu omndeni.
NgoNcwaba amaphoyisa KwaZulu-Natal adalula ukuthi izimoto eziningi ezebiwa eJozini naseManguzi zidayiswe eMozambique.